Kurasikirwa kweNyika Heritage Chinzvimbo Kuchakanganisa Liverpool Tourism Kudzoreredza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Kurasikirwa kweNyika Heritage Chinzvimbo Kuchakanganisa Liverpool Tourism Kudzoreredza
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Tsika yekushanya ikozvino bhizimusi hombe, iine 29% yemusika wepasi rose wekufamba unowanzoita irwu rudzi rwe rwendo.
Vashanyi vepasi rese vanoshandisa zvakanyanya paavhareji zvichienzaniswa nevashanyi vekumba.
Liverpool parizvino yakagadzirirwa kurasikirwa nemabhenefiti akati wandei nekuda kwechiziviso chazvino.
Liverpool ikozvino inoda kuve inoratidzira mukubata kwainoita nhau idzi.
Nepo kudhara kwekushanya kwemudzimba kungangodaro kusiri kukanganiswa zvakanyanya ne kurasikirwa kwenzvimbo yenyika yeLiverpool yenyika, kudiwa kwenyika dzese kunogona kuve sevashanyi vepasi rese vanoshanyira Liverpool kuti vaone tsika nemagariro eguta.
Tsika yekushanya ikozvino bhizimusi hombe, iine 29% yemusika wepasi rose wekufamba unowanzoita irwu rudzi rwe rwendo. Kurasikirwa kwehunhu hwayo hwenhaka kunogona kubvisa kupenya kwetsika yeLiverpool uye kunokonzeresa vashanyi vekunze kushanyira dzimwe nzvimbo dzekuUK dzakachengeta zita iri, seBath.
Vashanyi vepasi rese vanoshandisa zvakanyanya paavhareji zvichienzaniswa nevashanyi vekumba. Sekureva kwedata indasitiri, mu2019 (gore rekupedzisira 'rakajairwa' rekushanya), avhareji mari yekushanyirwa mhiri kwemakungwa pamugari wese yakamira paUS $ 1,057, nepo avhareji yekushanya kwemumba inoshandisa munhu wese muUK akamira paUS $ 263 (GB £ 191).
Liverpool inoda kukwezva yakawanda yekushanya kwepasirese sezvinobvira mumakore anouya ichifunga huwandu hwakakura hwemari yainoburitsa. Nenhaka yaro yazvino yaenda, kudiwa kwepasi rose kunogona kukanganiswa, uye kupora kunogona kuwedzerwa.
Liverpool parizvino yakagadzirirwa kurasikirwa nemabhenefiti akasiyana siyana nekuda kwechiziviso chazvino. Seizvo zvataurwa kwazviri, kudhinda kwakawedzera uye kushambadza kunouya nekuve nzvimbo yenyika yepasirese kunowedzera kushanya kwepasi rese uye kunoita sechishandiso chakasimba chekushambadzira icho iro guta rinofanira kubhadhara zvishoma. Kuva nechinzvimbo chenyika nhaka chinenge chichiita sekodhi yemhando pamusika wepasi rose kuti uone. Izvi zvinonyanya kukanganisa musika wesimba weChinese sosi inozivikanwa inozivikanwa nekukanganiswa nematagi anoratidza hunhu kana kugona. Pasi pechinzvimbo, nzvimbo dzenhaka dzinokodzerawo kuwana mari yekudzivirira uye kugadzirisa.
Kushanyirwa kwenyika dzese kungadai kwakatora nguva kupora mushure mekuvapo kwedenda, zvakadaro, kukura uku kunogona kutora nguva yakareba kuti vadzokere izvozvi Liverpool payakarasikirwa nenhaka yenyika. Guta ikozvino rinofanirwa kuve rinoshanda mukubata kwenyaya iyi, kunyangwe izvi zviri nekugadzira mishandirapamwe yekushambadzira kumusika wepasi rose, kana nekukurumidza kukumbira danho iri kuti riwanezve kukwezva kwetsika.